Nahandro matsiro manerantany ao anatin’ny bilaogy folo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2018 4:10 GMT
Efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana no andanian'ny miaramila ny fotoan'ny fialantsasatra any Iraka? Ity no andro handraisanao ny tantara, voalohany avy amin'ny Chairbone Stranger, miaramila Amerikana iray nalefa tany amin'ny toerana vovohana any Iraka. Hahatonga anao tsy hahateny, na, farafaharatsiny mandritra ny fotoana kelikely ny tatitra momba ny sakafony hariva andro mialoha ny Krismasy!
“Navesa-danja teo am-pelatanany ny tandramokotra. Voajanahary ho azy ny TONG-MASTER.” [Fifehezana tandramokotra] Amin'ny alàlan'ny politika braai – raharahan'ny lehilahy, raharahan'ny lehilahy matotra, Mark's Digital Farm manome antsika topi-maso, fitantaràna tsy manam-paharoa momba ny politika sy ny toetran-dehilahy mijoro manodidina ny braai, endrika afrikanina Tatsimo amin'ny kitonotono Amerikana.
One Whole Clove nanapa-kevitra ny hilalao ny ampahany amin'ilay vehivavy mpikarakara tokan-trano leo ary lasa mazoto sy sahirana amin'ny nahandro vaovao izay mety hahatonga ireo mpitia sakafo sy tia misakafo hibanjina sy hanala ny fahakiviana. Tsidiho ny blaoginy mba hahazoana izany nahandro matsiro izany mba hikarakara Smoked Salmon Cheesecake (mofomamy amin'ny frômazy miaraka amin'ny saumon fumé) ankehitriny!
Sailu's Food manolotra lahatsoratra tena mahaliana momba ny fiaviana sy ny tombontsoa ara-pahasalamana avy amin'ny ravina maitso antsoina hoe “anana mena”. Hibiscus cannabinus, antsoina hoe ravin'anana marikivy, roselle, gongura (telugu), pulicha keerai (Tamil), Ambad bhaji, ambada, ambadi (Hindi) dia anarana hafa entin'ity anana maitso ity any amin'ny Fanjakana Atsimon'i Andhra Pradesh. Ho an'ny farany mahafinaritra, mizara nahandro matsiro mba hikarakara “cornichons (voatavokely) andhra, izay tena ankafizin'ny reniny, Amma, i Sailu.
Avy any Vietnam, VietnameseGod manome nahandro matsiro indrindra mba hikarakarana Vietnamese Fresh Spring Rolls [Mofo vao fararano vietnamiana]. Araka izay mety fantatrao amin'izao fotoana izao, ireo kanto “horonan-dohataona (rouleaux de printemps)” ireo dia iray amin'ireo tsakitsaky malaza indrindra any Vietnam, ary satria avy amin'ny sakafon'ny trano fisakafoanana mahazendana “Seasons of Hanoi,”. Manantena fa ankafizinao izany!
Satria andro vitsy sisa no ho ao Saigon, nahita zavatra hafa tao amin'ny lisitry ny ‘zavatra atao’ miaraka amin'ny fitsidihany an'i Chanh Hung, tsena alina tsy dia fantatra ao akaikin'i Cho Lon i No Star Where. Iray amin'ireo fitsidihana velona indrindra nataoko tamin'ny fanampian'ny bilaogy izany: mamelona ny fahatsiarovany ny avana miloko, mahafinaritra fotsiny! Ary ankehitriny, avy amin'ny No Star Travels, mandrakitra ny dia tao amin'ny firenena fito any Azia, manomboka any Kambodza izy. Jereo ny blaoginy ary araho ao anatin'ny fepetra tsy hay adinoina izany. Tahaka ny fomba nitiavako izany!
BlueLotus avy any Japana mizara ny 01/07 Dinner: Nanakusa-gayu, vary nampangotrahina amin'ny ahitra fito nentim-paharazana. Ao amin'ny dingana nahandro tsikelikely mahavariana ahitana sary miloko mamirapiratra, mampianatra antsika ny fomba fikarakarana o-kayu (vary nampangotrahana, toy ny congee shinoa) nahandroana niaraka tamin'ireo ahitra fito amin'ny lohataona izy. Tsy isalasalana fa fomban-drazana matsiro izany.
Ny blaogin'i Marcela, La Majuluta avy any Arzantina, dia lasa iray amin'ireo toerana cyber malaza indrindra hahitana nahandro matsiro tsy mampino sy sary mahafinaritra avy any Arzantina. Tsy mahandro sakafo mahafinaritra ihany ity tovovavy ity fa mankafy fizika ihany koa, ary hitako ny blaoginy amin'ny teny Frantsay, Espaniola, Italiana ary Anglisy! Satria manana fahatsiarovana dulce de leche matsiro aho tamin'ny fotoana niainako tany Buenos Aires, dia manoro hevitra anao aho hifantoka manokana amin'ny “Mousse de Dulce de Leche” an'i Marcela, izay famoronana mampilela-tanana mendrika lanjana volamena!
Saveurs Mexicaines: Les aventures culinaires d'une française au Mexique, dia bilaogy iray momba ny fiainana any Meksika sy ny famoronana nahandro vahiny ho hitanao ao. Amin'ity herinandro ity, manoratra momba ny nopales (Opuntia ficus indica) i Laurange ary mizara nahandro mahafinaritra hikarakarana “Ensalada de Nopales“.
Raha “virjina caipirinha” ianao dia manoro hevitra anao hitsidika ny The Kitchen Journal an'i Grace mba hahazoana nahandro matsiro indrindra hikarakarana caipirinha, izay zava-pisotro Breziliana malaza indrindra, tena mora karakaraina. Ny singa fototra ho an'ny caipirinha dia ny “CACHAÇA”, alikaola avy amin'ny fary. Ankehitriny, aza mikorapaka azafady ary aza misotro raha mitondra fiara ianao:) Avy any Filipina i Grace, saingy monina ankehitriny sy manoratra avy any Luanda, Angola..